Homeसमाचारपछिल्लो २४ घन्टामा को’रोनाबाट २४६ जनाको मृ’त्यु, ८ हजार १७३ संक्र’मित
May 19, 2021 admin समाचार 3978
पछिल्लो २४ घन्टामा ८ हजार १७३ जनामा कोरोना भाइरस सं’क्रमण पुष्टि भएको छ। परीक्षण गरा’एकामध्ये पीसीआरबाट ८ हजार ६४ जनामा र एन्टिजेनबाट १०९ जना गरी ८ हजार १७३ जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रा’लयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए।
डा. गौतमका अनु’सार पछिल्लो २४ घन्टामा कोरोनाबाट थप २४६ जनाको मृत्यु भएको छ। थप ७ हजार ९८९ जना को’रोनामुक्त भएका छन्। यस्तै काठमाडौं उपत्य’कामा २४ सय ८८ जना संक्रमित थपिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल ९५४ जना क्वा’रेन्टाइनमा छन्।
यो पनि, स’त्तारुढ नेकपा (एमाले) वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई राष्ट्रियसभाको उपनि’र्वाचनमा सहयोग गर्न नसक्ने बताएका छन्। मंगलबार दिउँसो सह’योगको आग्रह गर्न वरिष्ठ नेता निवास कोटेश्वर पुगेका एमालेकै उम्मेदवार थापालाई नेपालले सहयोग गर्न नसक्ने बताएको नेपा’लको निजी सचिवालयले जनाएको छ। बिहीबार बागमती प्रदेशमा हुने राष्ट्रियसभा उपनि’र्वाचनमा एमालेको तर्फबाट थापा उम्मेदवार बनेका छन्।
पूर्वप्रधानम’न्त्रीसमेत रहेका वरिष्ठ नेता नेपालले उम्मेदवा’री दर्ताको समयमा अन्य दललाईसमेत सहमत गराएर डा. खिमलाल देवकोटालाई आफ्नै पहलमा उम्मेद’वार बनाएको भन्दै उनका वि’रुद्ध अन्यथा गर्न नसक्ने बताएका हुन्।
दिउँसो भएको वार्ता’को विषयमा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै उनको सचिवा’लयले यस्तो बताएको हो। नेता नेपालले डा. देवकोटाको उम्मेदवारीको विषयमा अन्यथा गर्न नसक्ने बताए’पछि थापाले भने मतदातालाई स्व’विवेक प्रयोग गर्न भनौँ भन्ने प्रस्ताव गरेको सचिवालयले जनाएको छ। थापाको उक्त प्रस्ता’वमा भने नेपाल सहमत भएका छन्।
‘आज कमरेड राम:बहादुर थापा कोटेश्वर निवासमा आई पर्सि हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सहयोग गर्न भनेकोमा पूर्वप्रधा’नमन्त्री एवम् वरिष्ठ नेता माध’वकुमार नेपालले उम्मेद्वारी दर्ताको परिस्थितिमा अन्य दलहरू सहितलाई सहमत गराएर डा. खिमलाल देव’कोटालाई आफ्नै पहलमा उम्मेद्वार बना’एकोले अहिले अन्यथा गर्न नसक्ने कुरा स्पष्ट पार्नुभयो’, नेपालको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘त्यसपछि कमरेड थापाले नै त्यसो भए मतदाताहरूलाई स्वविवेक प्रयोग गर्न भनौं भन्ने प्रस्ताव ग’र्नुभएको हो। मतदाताले स्वविवेक प्रयोग गर्ने कुरामा सहमति छ।’
वरिष्ठ नेता नेपालको सचि’वालयले कतिपय मिडियामा थापालाई मतदान गर्ने सहमति भएको भन्दै सार्वजनिक खब’रको भ्रममा नपर्न अनुरोधसमेत गरेको छ। ‘कतिपय स्थान एवम् मिडियामा प्रचार गरिएजस्तो अन्य कुनै सह’मति भएको छैन। भ्रममा नपर्न सबैलाई अनुरोध छ’, वरिष्ठ नेता नेपालको सचिवालयबाट मोहन गौतमले सा’र्वजनिक गरेको प्रेस नोटमा थप भनिएको छ। अन्नपूरणपोस्ट बाट
आमाले रुँदै भनिन्, म निदाएछु बिहान त छोराको मृ’त्यु भैसकेको रहेछ (भिडियो सहित)
May 1, 2021 admin समाचार 4591
May 11, 2021 admin समाचार 3903
April 9, 2021 admin समाचार 4590